राणाशासन ढाल्ने बन्चरो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
राणाशासन ढाल्ने बन्चरो
श्रावण २०, २०७५ भैरव रिसाल
काठमाडौँ — ‘म आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्दै छु,’ १९७६ चैतमा त्रिचन्द्र कलेज उद्घाटन समारोह सकिएपछि सबै समक्ष चन्द्रशमशेर जबराले भनेछन् । त्रिचन्द्र नेपाल मुलुकको पहिलो कलेज हो ।
त्यसै बेला भाइ भीमशमशेर र जुद्धशमशेर दुवैलाई औँल्याउँदै फेरि थपेछन्, ‘यस्ताले पछि कसो गरी राजकाज चलाउलान्, जंगबहादुरको समयमा जनता भेडा समान सोझा थिए भने वीरशमशेरको समयमा जनता साँढे समान भइसकेका थिए, मेरो समयमा अहिले जनता सिंहसमान भइरहेछन् । पछि हुने यस्ता नाथेहरूको समयमा जनता के–के कस्ता–कस्ता हुने हुन् र यी नाथेहरूले कसो गरी राजकाज समाल्ने हुन् ।’
मेट्रिकुलेसन जाँच पटनामा
चन्द्रशमशेरको माथिको भनाइले धेरै कुरा भने जस्तो लाग्छ । जंगबहादुर कुँवरले १९०३ असोज १ गते प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति पद पाएका थिए महारानीबाट । चन्द्रशमशेरका अनुसार जंगबहादुरको समय भेडा समान सोझा रहेका जनता ५० वर्षमा साँढे समान सिँगौरी खेल्ने भइसकेछन् । त्यसको १०/१५ वर्षमै आफ्नो पालामा सिंह समान भइरहेको देखेछन् उनले । ६५/७० वर्षमै जनतामा त्यत्रो परिवर्तन भेडाबाट सिंह समान † चन्द्रशमशेरको यो मर्मस्पर्शी बिलौनाबाट पनि सिद्ध हुन्छ त्रिभुवन चन्द्र कलेज उनले स्वयं आफ्नो इच्छाबाट खोलेका थिएनन् ।
कलेजको नाम ‘त्रिभुवन चन्द्र’ रहेछ सन् १९१८ मा । ६ वर्षपछि त्रिभुवनको ‘त्रि’ मात्र राखिएछ र चन्द्रशमशेरको चन्द्र मात्र राखी ‘त्रि–चन्द्र कलेज’ नाम रह्यो । यो कलेज पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त हो । सुरुमा ६ विषयको पढाइ हुन लागेछ । परीक्षार्थीले सन् १९२८ सम्म म्याट्रिकुलेसन परीक्षा दिन पनि पटना जानुपर्ने रहेछ । तर १९२९ देखि परीक्षा नेपालमै हुन थालेछ । त्यतिबेला पढेलेखेका नेपाली कम थिए तसर्थ दरबार हाईस्कुलका हेडमास्टर बटुकृष्ण मैत्रलाई कलेजको प्रिन्सिपल बनाइएछ ।
अंग्रेजको बलबाट कलेज र बैंक
अंग्रेजले बीसौ शताब्दीमा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा उभिन केही न केही पूर्वाधार चाहियो भनी प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्झाएर, दबाब दिएर खोल्न लगाएको रहेछ त्रिचन्द्र कलेज र नेपाल बैंक । एउटा कलेजसम्म पनि नभएको, एउटा बैंकसम्म पनि नभएको देश पनि कहीं सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्छ र भन्ने तर्क गरी यी संस्था स्थापना भएका रहेछन् । यो कुराको रहस्य डायमण्डशमशेर राणाले मसँग रेडियो सगरमाथाको ‘उहिले बाजेको पालामा’ कार्यक्रममा २०५६ जेठ ३ मा भन्नुभएको हो ।
नोट काटेर हुलाकमा
नेपालको दौत्य सम्बन्ध अंग्रेज सत्तासँग मात्र थियो त्यति बेला । अंग्रेज शक्तिसँग व्यवहार गर्न पनि टाकनटुकन अंग्रेजी भाषामा बात मार्न पनि अंग्रेजी भाषाको पढाइ आवश्यक ठानी राणाहरूले थापाथली दरबारमा अंग्रेजी स्कुल सुरु गरेछन् । त्यही स्कुल पछि रानीपोखरी पश्चिम स्थानान्तरण हुँदा पनि नाम भने दरबार हाईस्कुल नै राखिएछ ।
अंग्रेजी भाषा नभई नहुने रहेछ भन्ने बोध गरेछन् टाठाबाठा राणाहरूले र छोराहरूलाई कलकत्तातिर अध्ययनार्थ पठाउन थालिसकेका रहेछन् । कैयौं राणाका छोरा त स्नातक मात्र हो र स्नातकोत्तरसम्म पनि गरेका सुवर्णशमशेरहरू थिए । हिमालयशमशेरले बम्बईमा पढ्दा नेपालबाट खर्च पठाउनुपर्ने । हुलाक भरपर्दो रहेनछ । तसर्थ भारतीय नोट आधा हुने गरी काट्यो र आधा पारिएका नोटहरू पठायो एकपल्ट । त्यो पाएँ भन्ने उताबाट जवाफ आएपछि अनि बाँकी आधा पठाउने । दुवै टुक्रा नोट पाएपछि हिमालयले नोट टाँसेर चलाउँथे रे ।
पहिलो ढलान घर सरस्वती सदन
मैले जानेबुझेसम्म सरस्वती सदन नेपालको पहिलो सिमेन्ट ढलान घर हो । वेदप्रसाद लोहनी इन्जिनियरिङ शास्त्र पढेर आएछन् । उनलाई ढलान घर ठड्याउन हुटहुटी लागेपछि सन् १९४५ मा सरस्वती सदन बनेको हो । त्यसअघि चितवनको कसरामा विसं १९६८ मा ब्रिटिस सम्राट जर्ज पञ्चम सिकार खेल्न आउँदा उनका निम्ति बाथरुम सिमेन्ट लगाएर बनाइएको थियो रे ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि बनेको मन्त्रिमण्डलमा नृपजंग राणा शिक्षामन्त्री थिए । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्री सरस्वती सदनबाटै काम गर्थे । त्यहाँ साहित्य, कला, संस्कृतिसम्बन्धी अनेक अनुष्ठान भइरहन्थे । त्यस्ता आयोजनाको सभापतित्व वा प्रमुख आतिथ्य इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्य, कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेल, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नाट्यसम्राट बालकृष्ण सम, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, भवानी भिक्षु, धरणीधर कोइराला, महानन्द सापकोटा, चित्तधर हृदय, हृदयचन्द्रसिंह प्रधानलगायतले गर्थे । पुण्यप्रभा ढुंगानाहरू पनि यदाकदा झुल्कन्थे । ढलान घर सबको रोजाइ हुन्थ्यो त्यतिबेला ।
सिमेन्ट संस्कारले दोहन
नेपालमा सिमेन्ट संस्कार प्रवेश गरेकै थिएन । सरस्वती सदनको प्रवेशद्वारमाथि बाछिटा छेक्न भनी ह्याङिङ पोर्टिको पनि बनाइएको थियो रे । त्रिचन्द्र कलेजका एउटा कार्यकालका प्रिन्सिपल आशुतोष गांगुली सरस्वती सदन पस्दा त्यो पोर्टिको खस्ला र टाउको फुट्ला भनी जहिले पनि दौडेर पस्थे रे ।
त्यो पोर्टिको अझै छ । हुतराम दाई (वैद्य) भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– सिमेन्ट उत्पादन भएपछि खोला, नदीनालाको दोहोलो हुन थाल्यो । सिमेन्टका लागि बालुवा नभई नहुने । बालुवाका लागि नदीखोलाको अत्यधिक दोहन हुने । वाग्मतीजस्ता संस्कृति र सभ्यताका मुहान विनाश हुने । सिमेन्ट नआउँदासम्म खोलानदीमा यथेष्ट बालुवा हुन्थ्यो । खराब पानी पनि प्रशोधन हुन्थ्यो । वाग्मती सभ्यता जोगाउन धौधौ छ अहिले । सिमेन्ट, निर्माण र सभ्यतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने ?
सरदार बाजेको बुद्धि
त्रिचन्द्र कलेजलाई सम्बन्धन दिने बेला नेपालले एउटा विषय नेपाली पनि राख्न खोज्यो । त्यसका निम्ति नेपाली भाषामा कति पुस्तक उपलब्ध छन् भनेर पटना विश्वविद्यालय यकिन हुन खोज्यो, जुन स्वाभाविक हो । त्यतिबेला सरदार रुद्रराज पाण्डेले पुस्तक धेरै देखाउने बुद्धि लगाएछन् । कुनै यता फर्काएर कुनै उता फर्काएर पुस्तक चाङका चाङ गरी मिलाएर राखेछन् । नेपाली भाषा र संस्कृत भाषाका थुप्रै ग्रन्थ रहेछन् भन्ने परेछ जाँचबुझ टोलीलाई । स्वीकृति मिल्यो ।
तर्केर हिंड्ने ज्वाइँ–ससुरा
डिल्लीबजारका विष्णुप्रसाद पन्तका छोरा यादवप्रसाद पन्त त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थे । त्यति बेला रुद्रराज पाण्डे कलेजका प्रिन्सिपल थिए । प्रिन्सिपललाई विद्यार्थीले गोडामा ढोग्ने रीत बसालिएको रहेछ । छोरीबुहारी कलेज पढ्ने युग थिएन । यादवप्रसाद पन्तसँग रुद्रराज पाण्डेकी छोरी रमादेवीको बिहे भयो । त्यसपछि एउटा गाँठो आइपर्‍यो– ज्वाइँले ससुरालाई खुट्टामा ढोग्नुपर्ने । नेपाली अझ बाहुन जातको संस्कारमा त ज्वाइँले ससुरालाई दण्डवत् गर्नु निषेधै छ । ढोग्ने प्रथा हटाउनु पनि सहज थिएन ।
सरदार बाजेले एउटा उपाय निकालेछन्– ज्वाइँ–ससुरा आमनेसामने नपर्ने, जम्काभेट नगर्ने । एउटाले अर्कोलाई देखेपछि परैबाट तर्केर हिंड्ने । यादवप्रसाद नेपालकै पहिलो विद्यावारिधि हुन् । महिला शिक्षाका सन्दर्भ सन् १९५० मा अंगुरबाबा जोशीले विशेष अनुरोध गरेर प्राइभेट परीक्षार्थीका रूपमा परीक्षा दिनुभएछ । त्यो घटना अपवाद हो ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०७:४५
मृत्युको हल्ला चलेपछि धर्मराज थापाले पोखरा र काठमाडौंमा सार्वजनिक सभा गरेर ‘म मरेको छैन, ज्युँदै छु’ भनेर भाषण गर्नुभएछ ।
श्रावण १३, २०७५ भैरव रिसाल
काठमाडौँ — जनकवि केशरी धर्मराज थापा ख्वाक्कख्वाक्क खोक्न थाल्नुभो । कताकता असजिलो मान्नुभो । असभ्य भएजस्तो मुखाकृति पार्नुभो । मैले सहजै भनेँ, ‘ज्युँदो मान्छे खोक्छ, ज्युँदो मान्छेलाई खोकी लाग्छ । किन असजिलो मान्नुभएको, असहज ठान्नुभएको ?’
२०५७ मंसिर १२ गते दिउँसो रेडियो सगरमाथा एफएममा म धर्मराज थापासँग ‘उहिले बाजेको पालामा’ साप्ताहिक कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै थिएँ । रेडियो, टेलिभिजनजस्ता सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा छलफल, अन्तर्वार्ताजस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा खोक्नु, हाछ्युँ गर्नु असभ्य मानिन्छ सामान्यत: । त्यसैले उहाँले असजिलो मान्नुभएको मैले लख काटेँ । असहज र अस्वाभाविक स्थितिमा भएको मान्छेबाट स्वाभाविक अभिव्यक्ति सम्भव हँुदैन । तसर्थ मेरा अतिथिलाई अन्यन्त स्वाभाविक एवं सहज वातावरणमा ल्याउनु मेरा लागि चुनौती थियो । अन्यथा रेकर्डिङको काम दोहोर्‍याउनुपथ्र्यो ।
दोहोर्‍याएर अन्तर्वार्ता गर्नुपर्‍यो भने त्यसको आत्मा मर्छ, सास नभएको लास सिँगारेजस्तो हुन्छ । अतिथिको उत्साह, उमंग खस्कन्छ । यसकारण मैले धर्मराज थापाको खोकीलाई सामान्यीकरण गर्नैपथ्र्यो । त्यसै गरेँ मैले । नभन्दै उहाँ सामान्य हुनुभो, सहज हुनुभो । त्यति मात्र हो र, धर्मराज थापा हौसिनु पनि भएछ मैले ‘ज्युँदो मान्छे खोक्छ के अनौठो भो र !’ भन्दा । ‘तपार्इं मर्नुभो रे’ धर्मराज थापा हौसिनुभो र भन्न थाल्नुभो, ‘कहाँ भैरवजी † देशका सकेसम्म धेरैतिरका लोकगीत संकलन गर्ने हुटहुटीले मनाङ भोटतिर लागेको थिएँ । फर्कन समय लाग्यो ।’ त्यो घटना २०११ साल फागुन–चैततिरको रहेछ ।
६४ वर्षपहिले पोखराबाट मनाङ आउजाउ गर्दा बास बस्न कस्तो थियो होला ? बाटोघाटो कस्तो थियो होला ? तै धर्मराज थापा गैछाड्नुभएछ । लामो समयसम्म उहाँ काठमाडौं नफर्कंदा हल्ला चलेछ काठमाडौंमा– धर्मराज थापा लोकगीत खोज्न मनाङ गएको, मरेछ उतै । यो हल्ला नेपाल बैंकका प्रबन्ध समितिका सदस्य नरप्रताप शमशेर थापाले समाज दैनिकमा छापियो भन्ने सुन्नुभएको रहेछ । नरप्रताप पोखरामा नेपाल बैंकको शाखा खोल्न जानुभएको ।
२०१२ वैशाख १ नव वर्षका दिन पोखरामा बैंकको शाखा उद्घाटन थियो । धर्मराज थापा पनि रमिता हेर्न त्यहाँ पुग्नुभएको । नरप्रतापको आँखा धर्मराजमाथि परेपछि उहाँ छक्क पर्नुभएछ । छक्क पर्नु नितान्त स्वाभाविक भयो । तब नरप्रतापले धर्मराजलाई ‘तपार्इं मरेको खबर समाज पत्रिकामा छापिएको छ रे । तुरुन्त काठमाडौं गई खण्डन गर्नुस्’ भन्नुभएछ । २०११ चैततिर काठमाडौंमा गोरखापत्रबाहेक समाज दैनिक मात्र निस्कन्थ्यो जसको सम्पादक मणिराज उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । नरप्रतापले धर्मराज थापाको मृत्यु भएको खबर समाजमा छापिएको भन्ने बुझ्नुभएको रहेछ ।
धर्मराज थापाले रेडियो सगरमाथामा सुनाउनुभयो, ‘नरप्रताप शमशेरले मलाई तपाइंका बारेमा कनिष्ट सूचक खबर छ, सकेसम्म छिटो अनिष्ट हल्लाको खण्डन गर्नुस् भन्नुभयो ।’धर्मराज थापा आफ्नो जन्मथलो बाटुलेचौरमा घर बनाउँदै हुनुहुँदोरहेछ । तसर्थ काठमाडौं आउनको साटो पोखरामै सार्वजनिक सभा गरी आफू नमरेको, जीवितै रहेको भाषण गर्नुभएछ । त्यसको खबर उही समाज दैनिकमा छापिएको रहेछ । त्यसको पुष्टि उक्त दैनिकका व्यवस्थापक मेरा परम मित्र ब्रजेशराज शर्माले समाज दैनिकको फाइल पल्टाएर गर्नुभएको हो ।
धर्मराज थापाले भन्नुभो, ‘त्यसपछि म काठमाडौं आएँ र मणिराजजीलाई भेटेँ । त्यतिले चित्त बुझेन । अनि केही बुज्रुकसँग सल्लाह गरेर काठमाडौंको भूगोलपार्कमा त्यतिबेलाका बौद्धिक कम्युनिस्ट गोविन्दप्रसाद लोहनीको सभापतित्वमा आमसभा आयोजना गरेँ । म मरेको छैन, ज्युँदै छु भन्ने फुर्तिलो भाषण गरेँ ।’ ४६ वर्षअघिको अनौठो घटनाको रहस्योद्घाटन भो । धर्मराज थापालाई खोकी नलागेको भए र मैले ‘ज्युँदो मान्छेलाई खोकी लाग्छ, खोकेर के फरक पर्छ र †’ भनी नहौस्याएको भए रुचिकर एवं दुर्लभ त्यो घटना इतिहासको गर्भमै हराउँथ्यो । ‘उहिले बाजेका पालामा’ कार्यक्रममा छलफल गर्दा धर्मराज थापा ७७ वर्षमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो उमेरको मान्छेलाई खोकी लाग्नु अनौठो हो र ? त्यसमाथि मंसिर १२ गतेको काठमाडौं खाल्डोको चिसो । कार्यक्रम सञ्चालक म पनि ७२ वर्षको थिएँ ।
‘म ज्युँदै छु’
‘नमरेको मान्छे मर्‍यो’ भन्ने खबर संसारका अरू मुलुकमा पनि यदाकदा छापिने रहेछन् । मैले पत्रकारिता थाल्दा २०१३–१४ तिर पुराना केही पत्रकारले भनेका सम्झना उदाहरणका रूपमा राख्न अनुमति चाहन्छु । बेलायतबाट निस्कने प्रसिद्ध ‘गार्जियन’ भन्ने एउटा पत्रिकाले एकजना प्रसिद्ध मान्छे मरेको समाचार छापेछ । त्यो खबर पढेर मरेको भनिएको मान्छे आफैं आई ‘म मरेको छैन, ज्युँदै छु कसरी र किन यस्तो खबर छापियो ?’ भनी गम्भीर प्रश्न गरेछन् र चर्को आलोचना गरेछन् ।
तर गार्जियनका सम्पादकले भने रे, ‘हाम्रो पत्रिकाले तपाईं मर्नुभो भनेपछि मर्नुभो । तपार्इं मर्नुभएको छैन भनी हाम्रो पत्रिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने, शंका गर्ने अवस्था हाम्रा लागि मान्य छैन । तसर्थ तपाईं मर्नुभएको छैन भनी खण्डन गर्न असमर्थ छौं । तर एउटा कुरा भने गर्न सकिन्छ त्यो हो, तपाईं फेरि बाँच्नुभो भनेर छाप्ने ।’ नभन्दै त्यसै गरे रे । खबरको विश्वसनीयता साँच्चै कति र कस्तो हुने रहेछ । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यस्तो नमरेको मान्छे मर्‍यो भन्ने छापिने रहेछ बिरलै । ‘मार्क ट्विन’ नाम गरेका प्रसिद्ध मान्छे मरे भन्ने छापिएछ पत्रिकामा । उनी प्रतिक्रिया दिँदै थिए रे, ‘मेरो मृत्युको खबर अलि अतिशयोक्तिपूर्ण रूपमा छापिएछ ।’ यस्ता कुरा संसारका अन्यत्र पनि कहिलेकहिले छापिन्छन् रे ।
करफोक धर्मराज बनाउने माटो
जनकवि केशरी धर्मराज थापाका बारे केही घटना उल्लेख गरूँ । उहाँको उत्थानको प्रारम्भिक कालखण्डमा इलाम जिल्लाको ‘करफोक’ भन्ने परम सुन्दर ठाउँलाई नेपालको शिक्षाको उज्यालो फैलाउने पावन स्थान छनोट गर्नुभएछ शिक्षाविद, शिक्षासेवी, महामनीषी महानन्द सापकोटाले । त्यसको पूर्वांग २००९ सालमा बृहद् कवि सम्मेलनको माध्यम रोज्नुभएछ । अहिले पनि करफोक विद्यामन्दिर नाममा विद्यालय सञ्चालित छ । स्थान साँच्चै अत्युत्तम छ ।
त्यो सम्मेलनमा धर्मराज थापाले ‘हो हो माले हो हो, हो हो झाले हो हो’ भन्ने गीत गाउँदा करफोक डाँडै नाचेको थियो रे । त्यति बेला गीतकार र गायक सुन्दर २८ वर्षे जल्दोबल्दो युवक धर्मराज थापा जनताको आँखाको ‘रातीगेडी’ नै भएको थियो रे । ती महामनीषी महानन्दजीसँग मैले पनि करफोक, धरान र काठमाडौंमा भेटी कुरा गर्ने अवसर पाएको थिएँ । आफूलाई धन्य सम्झन्छु । साँच्चै महामना ऋषिकल्प थिए महानन्द । नाम नै महानन्द किम् अधिकम् । धर्मराज थापालाई ‘जनकवि केशरी’ बनाउने आधारभूत एवं पावन माटो त्यही करफोक हो र ‘तिनै हो हो माले हो हो’ हरू हुन् भन्न मन लाग्छ । करफोक र महानन्द सापकोटाले शिक्षाको पवित्र एवं समुज्ज्वल अजस्र ज्योति वास्तवकै नेपालभरि फैलाए भन्नु बढी नहोला ।
जन्ती र घरगाउँले
धर्मराज थापा २०६३ वैशाख १७ गते मेरो गाउँ दधिकोटमा जन्त आउनुभएछ । हाम्रा मित्र भाइ हरिशरण तथा गीता विष्टकी छोरी सम्झनाको बिहेमा। बेहुला रामजी बोगटीका दाजुपट्टिका नजिकैका नाताले जन्ती भएर आउँदा झ्वास्स भेट भो अप्रत्याशित एवं अकस्मात् । धर्मराज थापा जन्ती, म घरगाउँले । त्यसरी भएको आकस्मिक भेटको अर्कै महत्त्व हुने रहेछ । मैले आफ्नो गाउँका विशेषताबारे किटान गरेर परिचय दिने मौका पाएँ । जन्त आएका धर्मराज थापा परिपक्व हुनुहुन्थ्यो । विषय र प्रसंग हेरेर कहिले गम्भीर बन्नुहुन्थ्यो, कहिले उन्मुक्त हाँसो हाँस्नुहुन्थ्यो । कहिलेकहिले जन्तीको स्वभाव पनि कोट्याउन खोज्ने । म पनि काँठे घरगाउँलेको स्वभाव र व्यवहारको सुषुप्त परिचय दिने चेष्टा गर्थें । अन्य सभा, समारोह एवं जन्तको माहोल निकै फरक हुने रहेछ । त्यो हाम्रो भेट साँच्चै अर्कैखालको भो ।
धर्मराज थापा अन्ततोगत्वा सत्ताको तातोन्यानो बढी मन पराउनेजस्तो लाग्छ । सत्ता फेरिनासाथ उहाँका गीत र प्रस्तुति पनि सहजै फेरिने हुन् कि ? पञ्चायत ढलेपछि थापाको एउटा गीत आयो ‘प्रजातन्त्रको काफल पाक्यो’ हो क्यार । ज्ञानेन्द्रकालमा उहाँलाई निकै संकट पर्‍यो जस्तो लाग्छ । मलाई मन नपर्ने कामचाहिं उहाँका नामको पुरस्कार छोरी ज्ञानु राणालाई दिनु हो । ज्ञानु राणाप्रति मेरो आपत्ति होइन । उहाँको योगदान सानो छैन तर बाआमाको पुरस्कार छोरीलाई दिनु राम्रो हो र ? मात्र जिज्ञासा ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:४०